I-SPC FLOORING PROS AND CONS - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi I-SPC Flooring Pros and Cons
I-SPC Flooring Pros and Cons
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwi-SPC yoyilo kunye neengozi malunga nokuba yintoni, indleko kunye nemibuzo edumileyo malunga nale nto. Umgangatho we-SPC wenziwe ukuphindaphinda ukubonakala komthi wokwenene wendalo. Kuyafana nakwimigangatho yeplanethi ye-vinyl, i-SPC flooring ibonelela ngezinto ezininzi ezinokwenza ukuba ibe lukhetho oluqinisekileyo kuyilo lwakho lwangaphakathi.
Yintoni i-SPC Flooring
Iinkonzo SPC nokwadala
Ixabisa malini i-SPC Flooring?
Umgangatho we-SPC wemibuzo edumileyo
Ngaba i-SPC Flooring yinto elungileyo?
Ngaba i-SPC ingcono kuneLaminate?
Yeyiphi engcono i-SPC okanye i-WPC?
Ngaba i-SPC Flooring ifuna ukuGalelwa?
Ngaba i-SPC Flooring ityhefu?
SPC imele ilitye edityanisiweyo ngeplastiki okanye ilitye Polymer. Luhlobo oluthile lomgangatho weplanethi ye-vinyl. I-SPC inokuphinda ipapashwe njengeplanethi eqinileyo ye-vinyl, i-vinyl flooring engenawo amanzi, okanye i-vinyl flooring.
Umgangatho weVinyl unamaleko amane. Emazantsi eplanga yindawo efihliweyo, ebonelela ngomqamelo kunye nokunciphisa isandi.
Okulandelayo kuza isiseko, esingumqolo okanye umqolo weplanga. Uluhlu loyilo lwefotorealistic luhleli embindini, luboleka ukubonakala komthi okanye ilitye kule mveliso yenziwe yile ndoda. Okokugqibela, umaleko ophezulu yingubo ecacileyo yokukhusela ebizwa ngokuba kukunxiba.
Uninzi lokwahluka phakathi kweentlobo ze-vinyl flooring zihla ziye kumbindi. Inqaku elichazayo le-SPC sisiseko esiqinileyo, esenziwe ngelitye lekalika, i-polyvinyl chloride, kunye neearhente zokuzinzisa.
Into evikela amanzi - Umgangatho we-SPC awunakuchukunyiswa ziziphumo zamanzi, nto leyo eyenza ukuba ibe lukhetho oluhle kakhulu kumagumbi angaphantsi, amagumbi okuhlamba, izindlu zangasese kunye neekhitshi. Ayisiwo kuphela amaplanga ngokwawo angenamanzi ngokupheleleyo, undoqo awuchaphazeleki kukwanda okunxulumene nokufuma okanye ukucutha.
Kulula ukuyifaka - I-DIYers iyayithanda i-SPC flooring kuba kulula ukuyifaka. Uninzi lweemveliso ze-SPC zibonisa ukufakwa 'kokudibana', okuthetha ukuba akukho zikhonkwane okanye iiglu ezifunekayo. Endaweni yoko, iiplanga ziyilelwe ngokudibanisa imijelo. Umgangatho we-SPC unokufakwa ngaphezulu kwawo nawuphi na umphezulu onzima, ngaphandle kwesidingo sokulungiselela ngokubanzi.
Kulula ukusika - Ukusika iiplanga ze-SPC kubungakanani akunakuba lula. Ngelixa ukhuni, iithayile kunye nelitye lifuna izixhobo ezizodwa zamandla, yonke into oyifunayo kwi-SPC yimela yokusetyenziswa. Mane ubhale iplanga ofuna ukuyisika, emva koko uyijikeleze kwaye uyijike kude nomgca wokufumana amanqaku. Iplanga iya kuthi qheke kubini, ibe nomgca osikiweyo ngokumangalisayo.
Yomelele kakhulu - Xa kuthelekiswa nezinye iimveliso zomgangatho, i-SPC yomelele kakhulu. Uninzi lwabavelisi banika iwaranti yeminyaka eli-15. Ngolondolozo olufanelekileyo, i-SPC inokuhlala ukuya kuthi ga kwiminyaka engama-20.
Ilungele ukugcwala kweenyawo eziphezulu - I-SPC ilungele ukusetyenziswa kwiindawo ezigcwala kakhulu, kwaye ngenxa yesi sizathu iyathandwa kulwakhiwo lwentengiso.
Kulwakhiwo lokuhlala, kuyinto eqhelekileyo ukubona i-SPC ifakwe kwiipaseji, ekhitshini, nakwigumbi lokuhlambela, ngenxa yesakhono sayo esikhethekileyo sokuma ukunxiba kunye nokukrazula. Nokuba ifanitshala enzima ayinakucofa imigangatho ye-SPC.
Kubiza kakhulu kune-laminate - Umgangatho we-SPC uthathwa njengemveliso yokunethezeka, kwaye ngenxa yoko ibiza kakhulu kune-laminate okanye enye imveliso ye-vinyl. Nangona kunjalo, ibiza kakhulu kunokuba izinto zendalo ziyilingisa.
Ukukhululeka kancinci kunezinye iintlobo zomgangatho - Ngelixa isiseko esiqinileyo se-SPC sisenza ukuba somelele ngokungummangaliso kwaye sinxibe isinxibo, ikwenza ukuba olu hlobo lophahla lungakhululeki kwaye luhlale phantsi kweenyawo kunokukhetha okungaphezulu kakhulu.
Ixabiso lezinto eziphathekayo kumgangatho omtsha we-SPC libalwa ngenyawo lesikwere. Okwangoku, ukutyibilika kwe-SPC kunokuthengwa ngemali encinci njenge- $ 3, kunye neemveliso ezibiza kakhulu ezixabisa ukuya kuthi ga kwi-8 yeedola.
Igumbi lokuhlambela eliqhelekileyo lijikeleze i-40 yeenyawo zenyawo, ke lindela ukuhlawula phakathi kwe- $ 120 kunye ne- $ 320 ngezinto ezizodwa.
Ukuba ukhetha ukufaka i-SPC kwikhitshi eliqhelekileyo (ngeenxa zonke zeenyawo ezili-100), iindleko zezixhobo ziya kuba phakathi kwe- $ 300 kunye ne- $ 800.
Ngelixa ukutyibilika kwe-SPC kubiza kakhulu kunezinye iimveliso, kulula ukuyifaka kwaye ifuna ukulungiswa okuncinci komgangatho, ukuze ube nokuzifaka ngokwakho ukugcina iindleko zomsebenzi.
Ukuba ukuhlala ixesha elide, ukuhlala ixesha elide, kunye nokulula kofakelo kubalulekile kuwe, i-SPC flooring lukhetho olukhulu. Umgangatho we-vinyl omgangatho ophantsi unokuvelisa kwakhona ukuvela kwezinto zendalo ngaphandle kwendleko kunye nokugcinwa.
Nangona kunjalo, ukuba ujonge ukongeza ixabiso ekhayeni lakho, ilitye lendalo okanye wokhuni oluqinileyo lukhetho olungcono.
Uninzi lwabantu lufumana i-laminate flooring ukuze ikhululeke ngakumbi ukuma ngelo xesha nokwadala IVinyl iimveliso. Izinto eziphambili ze-laminate zihlala ziyi-fiberboard, eyenza ukuba ichaphazeleke kumonakalo onxulumene nokufuma njengokubumba kunye nexoshomba, ngelixa i-SPC iyaluchasa olu hlobo lomonakalo.
Inkqubo esetyenziselwa ukwenza i-laminate flooring ixhomekeke kancinci kwiikhemikhali eziyityhefu kune-SPC. I-SPC ibiza kakhulu kune-laminate.
Kwiimeko ezininzi, i-SPC ingaqwalaselwa njengophuculo kwi-WPC (iplastiki yomdibaniso womthi). Umahluko phakathi kwezi mveliso zimbini ngumxholo wee-cores zazo.
Ngelixa ilitye eliqinileyo lelitye le-SPC lingachaphazeleki ukufuma kunye notshintsho kubushushu, iiplanga ze-vinyl ezinomxholo wokhuni zinokuncipha kwaye zande nemozulu.
Ukuba ukufuma kugcwele iiplanga, isiseko seenkuni siya kugudla, sivelise umgangatho ongalinganiyo nongabukekiyo ofuna ukutshintshwa. Nge-SPC, kwelinye icala, undoqo awunandaba namanzi kwaye awuyi kuluguqula okanye utshintshe imilo.
Umgangatho we-SPC unokufakwa nakweyiphi na indawo elukhuni, kubandakanya ikhonkrithi kunye nethayile. Ngelixa ulungelelwaniso lunokuba yimfuneko ukuba umgangatho awalingani ngokungalinganiyo, izitenxo ezincinci azidingi kulungiswa phambi kokuba kufakelwe i-SPC.
Ingoma yokungena yomtshakazi nomyeni
Ayifuni i-subfloor ethile kuba ukufakwa ngaphantsi kudityaniswe kumaleko asezantsi emveliso.
Iimpawu eziguqukayo zezinto eziphilayo, ezibizwa ngokuba yi-VOCs ngokufutshane, zinxulunyaniswa neziphumo ezibi zempilo kwixesha elifutshane nelide.
Uluhlu lweemeko ezinxulunyaniswa nokuvezwa okuphezulu kwe-VOC kubandakanya imiba yokuphefumla kunye nokukhathazeka kolusu. Ezi khompawundi zikhutshwa kwiimveliso eziqhelekileyo zekhaya ngenkqubo ebizwa ngokuba yi ‘off gassing’.
Njengoko ulwazi lwabathengi lonyuka, abavelisi baphendula ngotshintsho kwinkqubo yabo yemveliso, banciphisa inani leeVOCs ezikhutshwa ziimveliso zabo.
Ukuba ufuna ukunqanda i-off-gassing, kuyakufuneka ukhethe izinto zendalo zomgangatho wakho, ezinje ngomthi okanye ilitye. Zonke iimveliso zomgangatho we-vinyl ziya kukhupha ii-VOCs ukuya kumgangatho omkhulu okanye omncinci.
Uninzi lweekhompawundi zikhutshwa emoyeni ngexesha kwaye kungekudala emva kofakelo. Ngesi sizathu, kubalulekile ukugcina indawo ingena umoya kakuhle kwiintsuku zokuqala ezimbalwa emva kofakelo lomgangatho omtsha we-SPC.
Ngelixa ezinye iimveliso zibhengezwa njengezo 'zisezantsi-VOC', oku ayisiyonyulo olusemthethweni.
Imichiza ethile enxulunyaniswe neziphumo ezibi zempilo yi-phthalate. Abavelisi baqalisile ukuvelisa i-phthalate-free SPC flooring yabathengi abazi impilo.
Ucinga ntoni ngezi zinto zintle kunye neengozi ze-SPC? Ukuba kukho nantoni na esiyiphosileyo masazise kwizimvo. Ukufumana umxholo onxulumene noko jonga igalari yethu ye imibono yegumbi lokuhlala .
Madoda thobelani abafazi benu
I tattoo yomtshato yomtshato kwizibini ezitshatileyo
Iindleko zomcwangcisi womtshato
Ixabiso eliphantsi le-2 carat yedayimane